ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ခါရာ – Media9
ကိုရီးယားကိုသွားရင်းနဲ့ကိုရီးယား ရှုတင်တွေကို သွားရောက်လေ့လာပါမယ် သူတို့ရဲ့presentation / story telling တွေ အရမ်းပြည့်စုံတယ်အဲ့တာကြောင့် သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေလေ့လာချင်တယ်
ကိုရီးယားကိုသှားရငျးနဲ့ကိုရီးယား ရှုတငျတှကေို သှားရောကျလေ့လာပါမယျ သူတို့ရဲ့presentation / story telling တှေ အရမျးပွည့ျစုံတယျအဲ့တာကွောင့ျ သူတို့နိုငျငံရဲ့ရုပျရှငျနဲ့ပတျသတျတာတှလေေ့လာခငြျတယျ
[Unicode] ကျွန်တော့်ကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကတော့ ကျနော်မဟုတ်တဲ့အရာကို လုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်ရတာကြိုက်တယ် မတူအောင်လုပ်ရမှာအကြိုက်ဆုံးပဲ ကျွန်တော်ဖြစ်နေရင် ဒီကာရိုက်တာရောက်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုအောင်မြတ်ကျွန်တော့ကို လမ်းညွှန်ပြသပေးရမှာပါ။ ကျွန်တော်က သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာ ကျွန်တော့ကာရိုက်တာကိုအတ္တကြီးတယ် [Zawgyi] ကြ်န္ေတာ့္ကို အဆြဲေဆာင္နိုင္ဆံုးကေတာ့ က်ေနာ္မဟုတ္တဲ့အရာကို လုပ္တဲ့အရာကိုလုပ္ရတာၾကိဳက္တယ္ မတူေအာင္လုပ္ရမွာအၾကိဳက္ဆံုးပဲ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ေနရင္ ဒီကာရိုက္တာေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး ကိုေအာင္ျမတ္ကြ်န္ေတာ့ကို လမ္းညႊန္ျပသေပးရမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္က သရုပ္ေဆာင္ဘက္မွာ ကြ်န္ေတာ့ကာရိုက္တာကိုအတၱၾကီးတယ္
June 19, 2019 media9
[Unicode] ညီမနဲ့အတင်ခံရတဲ့အစ်ကိုက ကားရိုက်လည်းအများကြီးဆုံဖူးတာမဟုတ် “ မေဆူးမောင်” နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတင်ပြီး ကောလာဟာလအဖြန့်ခံရတဲ့အပေါ် မေဆူးမောင် ဘယ်လိုပြောပြထားလဲ ၊ သူမလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အနုပညာ…. [Zawgyi] ညီမနဲ႔အတင္ခံရတဲ့အစ္ကိုက ကားရိုက္လည္းအမ်ားၾကီးဆံုဖူးတာမဟုတ္ “ ေမဆူးေမာင္” နာမည္ေက်ာ္မင္းသားတစ္လက္နဲ႔ ဓာတ္ပံုတင္ျပီး ေကာလာဟာလအျဖန္႔ခံရတဲ့အေပၚ ေမဆူးေမာင္ ဘယ္လိုေျပာျပထားလဲ ၊ သူမလက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အႏုပညာ….
ဂီတ ဆယ်လီ ဗွီဒီယို အနုပညာ
“ငါ့ရဲ့ကဗျာ”တေးစီးရီးနဲ့အတူ ပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့် ရေမွန်(Idiots)ရဲ့ ညီမလေး “လပြည့်ကဗျာ”
[Unicode] အချစ်သီချင်းလည်းမထည့်ချင်ဘူး။မိသားစုအကြောင်း၊အမေအကြောင်း ရေးထားတာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။မာင်နှမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ “မောင်နှမတွေ”သီချင်း လုပ်ရအောင်လို့အကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ… ဒီအခွေလေးမှာ ညီမအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်။မိသားစုသုံးယောက်လုံး ကြိုးစားထားတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်…”ငါ့ရဲ့ကဗျာ”တေးစီးရီးနဲ့အတူ ပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့် ရေမွန်(Idiots)ရဲ့ ညီမလေး “လပြည့်ကဗျာ” [Zawgyi] အခ်စ္သီခ်င္းလည္းမထည့္ခ်င္ဘူး။မိသားစုအေၾကာင္း၊အေမအေၾကာင္း ေရးထားတာလည္းမျဖစ္ခ်င္ဘူး။မာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ “ေမာင္ႏွမေတြ”သီခ်င္း လုပ္ရေအာင္လို႔အကိုနဲ႔တိုင္ပင္ျပီးလုပ္ျဖစ္သြားတာပါ… ဒီအေခြေလးမွာ ညီမအမ်ားၾကီးၾကိဳးစားထားပါတယ္။မိသားစုသံုးေယာက္လံုး ၾကိဳးစားထားတယ္ဆိုလည္းဟုတ္တယ္…”ငါ့ရဲ႕ကဗ်ာ”ေတးစီးရီးနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေရွ႕ကိုေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ေရမြန္(Idiots)ရဲ႕ ညီမေလး “လျပည့္ကဗ်ာ”